“उबेला राज्यबाट सतावट आउँदा पनि हामी भूमिगत भएर परमेश्वरको पाल तन्काउने काम गर्थ्यौं । | Nepali Christians
“उबेला राज्यबाट सतावट आउँदा पनि हामी भूमिगत भएर परमेश्वरको पाल तन्काउने काम गर्थ्यौं ।
October 4, 2014 4:17 pm by: Nepali Christians Category: Interviews A+ / A-
पाष्टर धन बहादुर लामा नेपाली मण्डली इतिहासका लागि ख्रीष्टमा दरिलो साक्षी हुनुहुन्छ । उहााले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परमेश्वरको पाल तन्काउने कार्यको निम्ति खर्चिनुभयो । आफूलाई एक असल सेवकको रुपमा प्रमाणित गर्न सफलहुनुभएका सुर्य विनायक, भक्तपूर स्थित “इम्मानुएल मण्डली” का वरिष्ठ पाष्टर धन बहादुर लामासँग निराजन मोक्तानको सहयोगमा श्रवन बोम्जनले उहाँकै निवासमा गर्नु भएको अन्तर्वार्ता:
पास्टर धन बहादुर लामा
♦तपाईको बारेमा केही बताई दिनुहोस न ।
मेरो नाम धन बहादुर लामा हो । १९८४ असार १२ गतेको दिनमा मेरो जन्म भयो । यही भक्तपुरमा भएको हो, र महान् परमेश्वरले उहााको अनुग्रहमा २०३० साल तिर मलाइ चुन्नुभयो, र त्यहि समय देखि म ख्रीष्टको प्रेमलाई मानिसहरुमा पुर्‍याउादै, प्रभूको अनुग्रहमा बााचिरहेको छु ।
♦हिजोआज गुरुबाको दिनहरु कसरी बितिरहेको छ ?
आजभोली प्राय म घरमै हुन्छु । समय समयमा नजिक रहेको विश्वासीहरुकोमा प्रार्थना, संगति गर्न जान्छु । प्रभुको जनहरुलाई उत्साह दिादै मेरो दिनचार्य बितिरहेको छ ।
♦तपाईले प्रभुलाई पाएको पहिलो दिनहरुमा संगतिको माहोल कस्तो थियो ?
त्यो समयमा पाष्टर तिर बहादुर देवान हुनुहुन्थ्यो । सुरु सुरुमा त हामी ४ जना मिलेर संगति गथ्र्याौ, र एकजना बराबर एक सुका भेटि उठ्दथ्यौा। हामी थोरैजना भएता पनि प्रभुको आत्मामा एक भएर विश्वासमा उत्साहित हुादै, ख्रीष्टको साक्षी भएर प्रचारमा हिाडेको अवस्था थियो । तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ, हामीले संगति गर्द एक सुका भेटी परमेश्वरलाई अपर्ण गथ्र्यौं किन कि त्यति खेर सामान सस्तो पैसा महँगो थियो । तर अहिले हेर्नुस्न कति धेरै अगाडी गैसक्यो । त्यहि एक एक सुका गर्दै जम्मा गरेर परमेश्वरको काम निश्वार्थ रुपमा गथ्र्यौं । उहिलेको माहोल र अहिलेको माहोल तुलना गर्द धेरै फरक पाउदछु । मलाई भन्नु हुन्छ भने पहिलेकै माहोल ठिक थियो ।
♦अहिले सम्मको सेवाकायको क्रममा, नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा रहेका मण्डलीहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
सबै ठाउामा मण्डलीहरुको एकता नदेखे पनि, हरेकले आफ्नो ठाउाहरुमा आत्मा बचाउने काममा प्रार्थना सहित लागेको देखो, परमेश्वरको काम प्रेम भएकोले मण्डलीहरु प्रेममा एक हुनुपर्ने कुरा पनि देखो । समाज एकदमै अगाडी गइसकेको छ । उबेला प्रविधिहरु त्यती थिएन । राम्रो संग बुझ्ने बुझाउने मान्छेहरु थिएन तर आज धेरै फड्को मारिसकेको छ । यसले गर्दा त अहिले बिश्वाशीहरु धेरै अगाडी बढ्नु पर्ने थियो । आशा गरे अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको मैले महसुस गरिरहेको छु । अहिले त परमेश्वरको काम भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति अलि बढी ढल्किएको जस्तो लाग्छ ।
♦सेवाकायको दौरानमा कहाँ कहाँ पुगेर काम गर्नु भयो ?
खासै म धेरै ठाउँमा पुगिना, तालिम र सेवाकायको दौरानमा केहि सिमित ठाउँमा पुगे पनि बढी जस्तो यहीं भक्तपुरमा नै रहेर मैले प्रभुको काम गरो ।
♦ पहिलाको दशकमा जस्तो आजभोलि पाष्टरहरुमा,विश्वासीहरुमा एकता देखिदैन नि ?
तपाईले भन्नु भएको ठिकै हो । आजकल पाष्टरहरुमा, विश्वासीहरुमा एकता देखिदैन । सेवाकायको दौरानमा कतिजना पास्टरहरु भौतिक कुराहरुमा धेरै लिप्त हुन खोजेको कसैले नकार्न सक्दैन । उबेलामा राज्य बाट हामीलाई धेरै सतावट आउाथ्यो, हामी भूमिगत भएर पनि आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरिकन परमेश्वरको पाल तन्काउने कार्य गथ्र्यौा । तर आज पास्टर अगुवाजनहरु धेरै जना आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएको कारण आशातित् एकता देखिदैन ।
♦तपाईले प्रभूलाई पाएको समयमा इसाईहरुलाई समाजले हेर्ने दृिष्टकोण कस्तो थियो ?
त्यो समयमा हामी ख्रीष्ट येशुलाई बिश्वास गर्नेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै आलोचनात्मक र घृणा मिसिएको हुन्थ्यो । छिमेकीहरुले हामीलाई यिनिहरुले पानी नचल्ने धर्म मानेका छन् भन्थ्ये, र कतिले बिदेशी धर्म मान्नेलाई समाजबाट बहिस्कार गर्नुपर्छ भनेर निकै क्रुर व्यवहार गर्दथे । कति ठाउामा नबुझेका कारणले आजसम्म पनि यस्ता खालका रुष्ट व्यवहार इसाईहरु माथि प्रहार भइरहेका छन् । तर हाम्रो समयमा हामीलाई घृणा गर्नेहरुका निम्ति हामीले प्रेममा प्रार्थना गर्याौ, र ख्रीष्टको प्रेम, भौतिक तिरस्कार र, कष्टहरुमाथि विजय भएको छ ।
♦आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परमेश्वरको काममा लगाउनु भयो र प्रभुको निम्ति नै जिउने क्रममा अहिले यो उमेरमा आई पुग्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
धेरै मानिसले नष्ट हुने धन र भौतिक दर्शनको निम्ति आफुलाई रित्याई रहादा, मैले ख्रीष्ट येशुको बलिदानलाई बुझ्न सको, र आज यो उमेर सम्म बााचेर क्रूसको गवाही हुन पाउादा मलाई धेरै राम्रो लागेको छ । मैले पाएको आशिष्को निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद ।
पास्टर धन लामा संग अन्तर्वार्ता लिनुहुँदै श्रवन बोम्जन
♦ पहिलेको पञ्चायती शासन व्यवस्था देख्नु भो, भोग्नु भो अनि अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई एकदम राम्रो लागेको छ, यो चााही परमेश्वरले आफ्नो जनहरुले गर्दै आएका प्रार्थनाको उत्तर पनि दिनुभएको हो । अर्को कुरा धर्मनिरपेक्ष देश भनेर घोषणा गरिएको भएता पनि अझै हामीले स्वतन्त्रता पूर्ण महशुस गर्न पाएका छैनाौ, सायद क्रुसको जीवन कठिन भएर नै हो, अझै नेपालको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ ।
♦धर्म निरपेक्ष हुनु अघि पंचायतकालको एकदलीय शासन व्यवस्था, एक धर्मको व्यवस्थामा तपाईले भोग्नु भएको दु:खको क्षणहरु सम्झनु हुन्छ ?
उत्तर : कति सालमा भन्ने मैले ठ्याक्कै अनुमान लाउन चाहीा सकिन, तर हामी एकचोटी केहि व्यक्तिहरु पक्राउ परेका थियाौ । त्यसमा मैले चाहीा खासै सजाय भोग्नु परेन तर पाष्टर तिर बहादुर देवानलाई चाहीा धेरै पिटेको कारण टाउकोमा चोट पर्न गयो जसको कारण उहाा मानशिक बिरामी भएपछि केहि समय उहाालाई मानशिक अस्पतालमा पनि राखिएको थियो, र पछी निको हुनुभयो ।
♦इसाईहरुले नेपाल देशलाई, अर्थात् हाम्रो समाजलाई के दिन सकिन्छ होला ?
के दिन सकिन्छ भन्दा पनि हामीले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो मानिसहरुलाई, ख्रीष्ट येशुबाट हामीले पाएको प्रेम दिन सिक्नुपर्छ । आज सिंगो संसारलाई नै चाहेको कुरा चाहीा प्रेम हो, हामीले नेपाललाई प्रेम दिनु पर्छ, प्रेम भन्दा ठुलो कुरा केहि छैन । हाम्रो प्रेम भनेको चाहीा सु–समाचार अर्थात् ख्रीष्टको गवाही हुनु हो । प्रभुले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ । यदि ख्रीष्टको प्रेम बााढ्दै हामी बढ्याौ भने नेपाललाई परमेश्वरले आशिषको देश बनाउनु हुनेछ ।
♦तपाईको बिचारमा जीवन के हो ?
उत्तर : प्रभुलाई नचिन्दा त जीवनलाइ धेरै कुरामा परिभाषित गरियो, तर अहिले जीवनलाई बुझ्दा सबै परिस्थितिहरु र घटनाहरु परमेश्वरको योजना रहेछ, परमेश्वरको महिमाको निम्ति सृष्टि भएको हाम्रो जीवन सुन्दर बरदान हो । परमेश्वरको हातको सिप हो जीवन । त्यसैले ख्रीष्टमा जीवन अर्थपूर्ण छ ।
♦अन्त्यमा देश तथा विदेशमा बस्नु भएका बिश्वासीहरुलाई के सन्देश दिन हुन्छ ?
हामी हरेक इसाईहरुलाई ख्रीष्ट येशूमा एउटा राम्रो सु–अवसर छ । हामी नेपाली इसाईहरु देश–बिदेशमा जहाा रहेता पनि सु–समाचार प्रचार प्रसार गर्दै आफ्नो छिमेकी, आफन्त, र सिङ्गो राष्ट हुादै संसार भरि पुग्नुपर्छ । हामी ज्योतिको सन्तान भएका कारणले हाम्रो जीवन नमुनाको जीवन हुनुपर्छ । मैले सुनेको छु आजकल बिदेशमा रहेका हाम्रो विश्वासी भाइ–बहिनीहरुले निकै सक्रिय रुपमा प्रभुको राज्यको पाल तन्काउादै, आत्माहरुलाई ख्रीष्टमा जिती रहेकाछन् । हो, यसरी नै बिदेशमा हुने र स्वदेशमा हुने प्रभुका जनहरुले सबै परिस्थितिहरुको बिचमा पनि पहिला आफुलाई ख्रीष्टको गवाही बन्न प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चहान्छु । परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जातीलाई राष्टलाई आशिष देउन् । आमेन् ।।
“उबेला राज्यबाट सतावट आउँदा पनि हामी भूमिगत भएर परमेश्वरको पाल तन्काउने काम गर्थ्यौं । Reviewed by Nepali Christians on Oct 04 . पाष्टर धन बहादुर लामा नेपाली मण्डली इतिहासका लागि ख्रीष्टमा दरिलो साक्षी हुनुहुन्छ । उहााले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परमेश्वरको पाल तन्काउने कार्यको निम्ति खर्च पाष्टर धन बहादुर लामा नेपाली मण्डली इतिहासका लागि ख्रीष्टमा दरिलो साक्षी हुनुहुन्छ । उहााले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परमेश्वरको पाल तन्काउने कार्यको निम्ति खर्च Rating: 0
हामी यति सङ्कीर्ण अवधारणा लिएर बाच्...विश्वासीहरुमा एकता छैन कि, अगुवाहरू...